Published October 5, 2021 at 11:57 AM CDT
Iowa gudaheeda, madaxweynaha gobolka NAACP Betty Andrews ayaa sheegaysa in ururku uusan weli mowqif ka qaadin khariidadaha la soo jeediyay, laakiin ay la socoto habka.
Diiwaangelin cusub oo Des Moines/Mediacom Iowa Poll ayaa lagu ogaaday in qiimeynta wanaagsan ee Madaxweynihii hore Donald Trump ee Iowa uu ka sarreeyo hadda sidii uu ahaa markii uu madaxweynaha ahaa.
Radio Iowa ayaa ku warramaya in Trump lagu wado in uu Sabtida isu soo bax ku qabto Des Moines, oo ah safarkiisii ​​ugu horreeyay ee uu dib ugu laabto gobolka tan iyo markii uu xafiiska ka tagay bishii Janaayo.
Diiwaangelinta Des Moines Iowa Poll ayaa lagu ogaaday in 53% dadka la daraaseeyay ay leeyihiin aragti aad u wanaagsan ama inta badan ku habboon madaxweynihii hore.
Xisbiga Jamhuuriga dhexdiisa, qiimeynta roonaanta Trump waa 91%. Taasi waa 10 dhibcood oo ka fiican cabbirnimada wanaagsanaanta Senator Chuck Grassley ee ka dhex jirta Jamhuuriyiinta.
In ka badan saddex iyo toban maxbuus iyo shaqaalaha xabsiyada Iowa ayaa laga helay kiisas hor leh oo ah COVID-19, sida ay sheegtay Waaxda Asluubta ee gobolka.
Lix iyo toban maxbuus iyo 26 shaqaale ah ayaa laga helay cudurka togan ka dib markii la tallaalay.
Mid ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka ayaa sheegaya in inta badan kiisaska horumarsan ay caadi ahaan aad u yaraayeen, laakiin had iyo jeer ma aha.
Xaakim ayaa ku xukumay nin u dhashay South Carolina inuu hooyadii tooreey ku dilay sanadkii hore magaalada Sioux. Paul Belk waxaa lagu xukumay dil…